အမျိုးသားများအတွက်အကောင်းဆုံးအလယ်အလတ်ဆံပင်ဖြတ်ခြင်း (၇) ခု | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အလတ်စားဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ပုံစံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကအသွင်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာထားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအတိအကျဘာတွေလဲ။ အလွန်ရိုးရှင်း: ၎င်း၏နာမကိုအမှီအကြံပြုထားသည်အတိုင်း, သူတို့တစ်ဝက်ဆံပင်တိုနှင့်လည်ဆံအကြားတိုင်းတာနေကြသည်.
သူတို့၏လူကြိုက်များမှု၏သော့ချက်တစ်ခုမှာ ၄ င်းတို့သည်စွယ်စုံဖြစ်သည်။ သူတို့ကသင့်အားဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်စမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခါသမယ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်သင့်စိတ်ဓါတ်များအရသိရသည်။ သင်အဆင်ပြေမည်ဟုသင်စိုးရိမ်ပါကအချို့သောပိုမိုပီတိဖြစ်သော်လည်းအများစုမှာဆံပင်တိုများကဲ့သို့လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
3 အလယ်အလတ်အရှည် surfer ဆံပင်ညှပ်
Brad Pitt သည်သူ၏ဆံပင်ကိုရှည်လျားစွာပင်သူ၏ပခုံးပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ ဖုတ်ကောင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော“ World War Z” ။ ၎င်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ဆံပင်ကိုရှည်လျားစွာကြီးထွားစေနိုင်သည့်အပြင်ဆံပင်ကိုအလယ်၌ဂန္တ ၀ င်ခြယ်လှယ်မှုနှင့်အတူတန်းတူညီမျှသောအပိုင်းနှစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးခွဲခြားရမည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုမင်းရဲ့နားနောက်မှာထားသင့်တယ်။ ဟုတ်တယ် ရိုးရှင်းပေမယ့်ထိရောက်သောဆံပင်.
Timothée Chalamet သည်အလယ်အလတ်ရှည်ဆံပင်ပုံစံများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်သူ၏မျက်နှာပေါ်တွင်သူ၏ရှေ့သော့ခလောက်နှင့်အတူကစားရန်ကြိုက်တယ်သူကွဲပြားခြားနားတဲ့ Premieres နှင့်ပွဲများတွင်ပြသခဲ့သည်အဖြစ်။ ဤတွင်သူမဂန္ထဝင်ခြမ်းခွဲခြင်းနှင့်အတူသူမ၏နားရွက်အပေါ်သူမ၏ဆံပင်ကိုဝတ်ဆင်။ အထက်ပိုင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အလယ်မှအောက်သို့ဖြစ်ပေါ်သောလှိုင်းများနှင့်အတူ 'Call me your name' ၏ဇာတ်ကောင်များကိုပျော့ပြောင်းတြိဂံပုံသဏ္shapeာန်ပေးသည်။
အလယ်အလတ်အရှည် surfer ဆံပင်ညှပ်
အကယ်၍ မင်းကစီစဉ်ထားပုံမပေါက်သည့်အလတ်စားဆံပင်ညှပ်များကိုပိုနှစ်သက်ပါက Jason Momoa ကအတော်လေးလှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်သည်။ သူ၏ Game of Thrones နှင့် The Justice League တို့တွင်ပါ ၀ င်မှုကြောင့်ဟာဝယေံသယ်ဆောင်ခဲ့သည် အဆိုပါ surfer စတိုင်အတွက်ချောင်ခြင်းနှင့်လှိုင်းတံပိုးဆံပင်။ ထိုရိုင်းစိုင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရန်အတွက်၊ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများလွန်းခြင်းမရှိဘဲကြီးထွားရန်သင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုဖြိုခွဲသောအခါသင်သည်အမြဲတမ်းရောဂါရှာဖွေသင့်သည်။ သငျသညျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်သဘာဝကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အားထုတ်မှုလုပ်ဖို့ရှိသည်။
'မင်းမဲ့စရိုက်၏သားများ' သရုပ်ဆောင်သည် လည်ပင်းပေါ်ဆံပင်နှင့်အလွန်ပုလ်လမ်းအတွက်ပုံစံ။ ၎င်းသည်ယခင်ထက်တိုတောင်းသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဆံပင်သည်မတူညီသောဆံပင်ပုံစံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှည်လျားသည်။ ချာလီဟွန်းနမ်သည်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်မဖြုန်းတီးဘဲအလေးချိန်အလွန်အမင်းလျှော့ချခြင်းမပြုဘဲအဆုံးသတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ကတိပြုထားသည်။
ယာရက်လက်တိုသည်သူ၏အသွင်အပြင်အပြောင်းအလဲကိုအမြဲအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ဤတွင်သရုပ်ဆောင်နှင့်အဆိုတော်တစ် ဦး ၏သူ၏ရှည်လျားသောမုတ်ဆိတ်နှင့်အတူလိုက်ပါ ပျမ်းမျှအရှည်ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးသောဆံပင်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဆံပင်သည်နားကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤဆံပင်ပုံစံသည်သင်၏အသွင်အပြင်များကိုပျော့ပြောင်းစေပြီးနုပျိုသောလေကိုပေးလိမ့်မည်။ အားနည်းချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်မနက်ခင်းတွင်အများဆုံးအချိန်ယူမည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Johnny Depp သည်သူ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကာလတစ်လျှောက်တွင်အလျားလိုက်ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့ပြီးသူ၏ဆံပင်နှင့်တက်တူးများမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤဆံပင်အရှည်ကိုသူ၏အမာခံအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ကိုလိုက်နာပါ 1980 မှတ်သားကြောင်း voluminous ဗေဒအရသာ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှင့်အစောပိုင်းကာလများ။ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သောအရာများအတွက်ပြင်းစွာသောဖျားနာမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။
ဂျိုး Keery (စတိဗ် 'Stranger Things' ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သူ) သည်ဤမသန့်ရှင်းမှုအတွက်ကူညီခဲ့သည် နားနောက်ကွယ်မှအလယ်အလတ်ဆံပင်, toupee နှင့်ဆံပင်ပေါင်းစပ် အနှစ်သုံးဆယ်အကြာတွင်ပြန်ဖက်ရှင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 80s အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း hairspray အသုံးပြုမှုလိုအပ်သည်။ သို့သော်သရုပ်ဆောင်အဆိုအရသူ၏ဆံပင်၏လျှို့ဝှက်ချက်သည် Farrah Fawcett ၏မှုန်ရေမွှားတွင်မဟုတ်ကြောင်းစတိဗ်သည် Dustin အားစွဲလမ်းစေသည့်ဒုတိယရာသီတွင်သာမကသူ၏ဗီဇများ၌ဖော်ပြခဲ့သည်။ မင်းသားကသူကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ဖို့အများကြီးလုပ်စရာမလိုဘူးလို့အာမခံထားတယ်။ သူသည်နှစ်ရက်သုံးရက်တိုင်းရေချိုးသည်။
သင်၏ဝက်ခြံတစ်ဝက်ကိုကောက်ယူခြင်းကသင့်အား hipster air ပေးလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဆံပင်ရှည်နဲ့အတူနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေဟာကြော့ရှင်းတဲ့ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရတဲ့အခါရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းသည်၎င်းကိုနောက်ပြန်လှည့်ပတ်သွားသည်။ ယခင်ဘောလုံးသမားဟောင်းကလည်ပင်းကိုရှင်းရန်လိုအပ်ပြီးဆံပင်ကိုအလယ်အလတ်အလွှာမှတစ်ဆင့်ခေါင်း၏နောက်ကျောတွင်စုဆောင်းထားကြောင်းနားလည်ခဲ့သည်။
'Poldark' စီးရီး၏ဇတ်ကောင်, Aidan Turner, သူမသည်သူမ၏အလယ်အလတ်ရှည်ဆံပင်ကောက်ဖို့မြင့်မားသော Bun အဘို့ကျိန်းဝပ်။ ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံဟုလည်းခေါ်သည့်ဤရွေးချယ်မှုသည်ကြိုးနှင့်ချည်မျှင်ကြိုးအနည်းငယ်ဖြင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဦး စားပေးကိစ္စဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » အလယ်အလတ်အရှည်ဆံပင်ညှပ်